Amabhizinisi Wokwelulekwa Kwebhizinisi - Amathuba Wama-Franchise | Franchiseek
I-Business Advisory Franchise
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»I-Business Advisory Franchise
Okufakiwe Kweluleki Lebhizinisi Lezinhlaka
Amabhizinisi Wokubhalwa Kwamabhizinisi wakamuva
Yini i-Bartercard futhi yini inikeza izinsizakalo? Kusukela kwethulwa i-Bartercard ngo-1991, amabhizinisi angenelele ngaphakathi ...
Eminyakeni embalwa edlule kube nesidingo esikhulayo samabhizinisi ukuze athole uxhaso aludingayo. Kungaleso sizathu imakethe yezeluleko zebhizinisi emazweni omhlaba ibikhula ngesivinini esikhulu iminyaka eminingi. Ngoba eyabo yisidingo esikhulu sensizakalo efana nabeluleki bebhizinisi nokuningi.
Yimaphi ama-Advisory Franchise Ebhizinisi Atholakalayo
Sinikezela ngezinhlobonhlobo ezibanzi zamasheya ahlukene ahlobene nebhizinisi athengiswa eFranchiseek. Ngakho-ke uma ucabanga ukuthi okuwukuphela kwamathuba okululekwa kwebhizinisi akhona kungukubonisana uyaphutha. Ngoba manje amabhizinisi asebenzisa abantu besithathu abaningi ukusiza ibhizinisi labo ukuba likhule futhi bathole izinkampani zabo lapho zidinga khona ukuba ngokwezezimali nangezeluleko ezisezingeni. Manje sizoklelisa amathuba ambalwa ozowabona lapha eFranchiseek:
Amathuba Okubonisana Kwebhizinisi: Ama-franchise wokubonisana abelokhu ethambela emkhakheni wezokulima iminyaka eminingi manje njengoba kunesisekelo esikhulu samakhasimende sezinsizakalo ezinjengalezi zaphesheya.
Amathuba Wokwehliswa Kwezindleko: Izinsizakalo zokunciphisa izindleko zisize amabhizinisi iminyaka manje. Ngokunciphisa izindleko ezingadingeki amabhizinisi azenzayo noma atshala imali kulezi zinsizakalo kusiza amabhizinisi nsuku zonke ukuthi angachithi imali futhi achume kakhulu.
Kungani Umkhakha Weluleki Webhizinisi Uthrend
Manje ngizobe ngibala ezinye izibalo eziqoqwe eminyakeni edlule mayelana nokuthi kungani kunesidingo esikhulu kangaka sosizo lwebhizinisi kumabhizinisi. Ezinye zalezi zibalo namaqiniso zingakumangaza futhi kukuvumela ukuthi wazi ukuthi bangaki abantu abasebenza amabhizinisi abo emhlabeni wanamuhla.
1 kubantu abayishumi e-UK benza amabhizinisi abo.
Ngo-2017 kwabikezelwa ngonyaka ka-2018 abanye abantu abayizigidi ezi-3.2 e-UK bazobe besungula awabo amabhizinisi.
Kube nabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-25 e-US abaqhuba amabhizinisi abo.
Ngo-2015 i-US yashaya irekhodi lephula osomabhizinisi abayizigidi ezingama-27.
Amabhizinisi amancane e-US anikela ku-64% wamathuba wokuqashwa e-USA.
Ama-55% abantu asebenzisa amabhizinisi abo e-US bekuzoba ngamakhosi abo lokhu kuqoqwe kwinhlolovo yakamuva.
Ukuqhamuka kwe-50% yamabhizinisi amancane aqale e-US kwehluleka ezinyangeni eziyi-12 zokuqala.
Kutholakale isizathu esiyinhloko sokuthi amabhizinisi ahluleke ngonyaka wokuqala ngezeluleko ezingezinhle.
Lokhu kukhonjiswa ngani emkhakheni wezokweluleka ngebhizinisi?
Sekukonke lezi zibalo zikhombisa imakethe enkulu yemisebenzi yokueluleka ngebhizinisi kumabhizinisi amancane. Kubonisa nokuthi bangaki abantu abazakhela izinkampani zabo kulezi zinsuku kusukela phansi kuya phezulu. Futhi isibalo esibaluleke kakhulu engingakusho kulokhu kuhlaziywa kwe-US ukuthi ama-50% amabhizinisi abonakala ehlulekile kwezeluleko noma ukwesekelwa okungahambi kahle. Lokhu kukhombisa ukuthi izinsizakalo zokweluleka ibhizinisi zibaluleke kangakanani kumabhizinisi amancane ukugcina ibhizinisi likhula kahle ngokwezezimali.
Joyina i-computer yezingane e-UK ehamba phambili yokulungiselela izingane ikusasa lakho Lungiselela izingane ngekusasa ngamakilabhu e-tech ajabulisayo futhi ajabulisayo Esiletha…